Reno4 | OPPO မြန်မာ
တီထွင်ဆန်းသစ်ထားသော ဓါတ်ပုံပညာဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များ
AI Color Portraitတိကျ မှန်ကန်စွာ စိုပြေလှပသည့် အရောင်များ
အားလုံးကို ညို့ယူဖမ်းစားပေးနိုင်သော eye-catching mode ကို အသုံးပြု၍ နောက်ခံ အဖြူအမဲတွင် ပေါ်လွင်ထင်ရှားသော အလှဓါတ်ပုံရရှိအောင် ရိုက်ကူးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
960fps Smart Slow-motion¹အနှေးရိုက်ချက် ရိုက်ကူးရအောင်
Reno4 တွင် အနှေးရိုက်ကွက်များ ပြန်လည်ပြသရာတွင် တစ်စက္ကန့်လျှင် ရုပ်ကူးသိမ်းဆည်းနိုင်သည့်နှုန်းမှာ လေးဆရှိပြီး 960fps ရှိပါသည်။
AI နည်းပညာသုံး အဆင့်မြင့် စမတ်အာရုံခံစနစ်
Smart AirControlထိရန်မလို၊ ဖိရန်မလို၊ လွပ်လပ်စွာဖြင့်
AirControl စနစ် အသုံးပြု၍ ဖုန်းလက်ခံခြင်း၊ အနှစ်သက်ဆုံး social media app ဖွင့်ခြင်း စသည်တို့ကို အလွယ်တကူ ပြုလုပ်နိုင်ပါပြီ။
စမတ်နည်းပညာသုံး ထောက်လှမ်းရေး ကာကွယ်မှုသင်၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ လုံခြုံမှု ကာကွယ်ရေး
Reno4 တွင် အခြားသော တစ်စုံတစ်ယာက်မှ သင့် Message အား ခိုးကြည့်၍မရအောင် အလိုအလျောက် ကာကွယ်မှု ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
*1. Reno4 ၏ အနှေးဗီဒီယိုရိုက်ချက်တွင် 240fps ကိုbအသုံးပြုထားပြီး ဖုန်းမျက် နှာပြင်ပေါ်သို့ ပုံရိပ်ထင်သည့်ကြိမ်နှုန်းတွက်ချက်မှု Frame insertion algorithm နှုန်းသည် 960fps အထိရှိသည်။
*2. Smart AirControl ကို Facebook, Instagram, Tiktok နှင့် TouTube များတွင်သာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Smart AirControl ဖြင့် ဖုန်းလက်ခံခြင်းတွင်သာ အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ Video call နှင့် အခြားသော Thirt party app များတွင် အသုံးပြု၍ မရနိုင်ပါ။ ထိုလုပ်ဆောင်ချက်ကို အသုံးပြုနိုင်ရန် အသုံးပြုသူ အနေဖြင့် Settings>Convenience Tools>Gestures & Motions>Air Gestures စသည့် အတိုင်း ဝင်ရောက်ချိန်ညှိပေးရမည်ဖြစ်သည်။
*3. အယ်လ်ဘမ်အတွင်း အမြန်ဝင်ရောက်ပြင်ဆင်ခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်ကို သတ်မှတ်ထားသော ဒေသအတွင်းရှိ ဖုန်းများတွင်သာ ပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အိန္ဒိယ၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ထိုင်း၊ ဗီယက်နမ်၊ မလေးရှား၊ ဖီလစ်ပိုင်နှင့် ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံ။
*4. ပါဝင်သောပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် တိုင်းတာမှုအပေါ်မူတည်၍ စက်၏အထူသည် ±0.2mm ကွာဟနိုင်ပြီး စက်၏အလေးချိန်သည် ဖော်ပြထားသော သတ်မှတ်ချနှင့် ယှဉ်ပါက ±3g ကွာဟမှုရှိနိုင်သည်။
*5. ဖုန်းမျက်နှာပြင်အရွယ်အစားကို ထောင့်ဖြတ်အနေအထားဖြင့် စင်တီမီတာဖြင့် တိုင်းတာခြင်းဖြစ်သည်။ Reno4 ၏ မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားသည် ထောင့်မှန်စတုဂံပုံအပြည့်အနေအထားဖြင့် 6.4 လက်မ (၁၆.၃ စင်တီမီတာခန့်) ရှိပြီး မျက်နှာပြင်နှင့် ဖုန်းကိုယ်ထည်၏ အချိုးသည် 90.7% ရှိပါသည် (အသုံးပြုသည့်ဧရိယာ)။ ထောင့်စွန်းအဝိုင်းနှင့် ကင်မရာအပေါက်နေရာများကို ချန်လှပ်ပါက ၎င်းထက်အနည်းငယ် လျော့နည်းနိုင်ပါသည်။
*6. OPPO ၏ စမ်းသပ်ချက်များအရ Reno4 တွင် ဘက်ထရီပမာဏ ၅၀% ရရှိရန် မိနစ် ၂၀ သာလိုအပ်ပါသည်။ အမှန်တကယ် အားသွင်းနိုင်သော အချိန်သည် စက်ပစ္စည်းတခုချင်းစီ သို့မဟုတ် မတူညီသော အခြေခံအကြောင်းတရားများ - ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန်၊ အသုံးပြုပြီးနောက် ဘက်ထရီစွမ်းရည် စသည်တို့အပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားခြားနားမှု ရှိနိုင်ပါသည်။
*7. 4015mAh သည် သာမာန်ဘက်ထရီတစ်ခု၏ ယေဘုယျတန်ဖိုးဖြစ်သည်။ နှုန်းအနိမ့်ဆုံး capacity သည် 3920mAh ဖြစ်သည်။
*8. ပြသဖော်ပြပေးသော ဘက်ထရီရာခိုင်နှုန်းသည် စက်ပစ္စည်းအလိုက် ကွာခြားမှုရှိနိုင်ပါသည်။ ဖုန်းတွင်ဖော်ပြသော "ဘက်ထရီပမာဥ ၅%" ဆိုသည်မှာ 4000mAh ဘက်ထရီ၏ ၅% နှင့် ညီမျှသည် ။ ဥပမာ - 200mAh.
*9. OPPO Reno4 တွင် ပါဝင်သော Quick Return Bubble လုပ်ဆောင်ချက်ကို PUBG, AOV (အိန္ဒိယတွင် မရရှိနိုင်ပါ) နှင့် Mobile Legends တို့တွင် အသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ အသုံးပြုနိုင်သော ဒေသများ - အိန္ဒိယ၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဗီယက်နမ်၊ ထိုင်း။
*10. OPPO Share ကို OPPO စက်ပစ္စည်းအချင်းချင်းသို့မဟုတ် အခြား သတ်မှတ်ထားသော စက်ပစ္စည်းအချင်းချင်း အချက်အလက် မျှဝေရာတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
*11. OPPO Lab ကို အချို့သော အော်ပရေတာများတွင်သာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
*12. ကုန်ပစ္စည်းဓါတ်ပုံများသည် ကိုးကားရန်အတွက်သာ ဖြစ်ပါသည်။ ကုန်ပစ္စည်း၏ သတ်မှတ်ချက်နှင့် အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များသည် အကြောင်းရင်းတချို့ပေါ်မူတည်ပြီး အနည်းငယ်ပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။ ကုန်ပစ္စည်းအမှန်တကယ် ထွက်ရှိချိန်မှသာ ကိုးကားမှုပြုပါရန်။
*13. ယခုကုန်ပစ္စည်းဆိုင်ရာဖော်ပြချက် အသေးစိပ်အချက်အလက်များသည် OPPO ၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ တိုင်းတာရေးအချက်အလက်များ၊ စမ်းသပ်ခန်းနှင့် အခြားကုန်ပစ္စည်း တင်ပို့သူများထံမှ ပေးပို့လာသော အချက်အလက်များမှ ရယူ ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကုန်ပစ္စည်း၏ အသေးစိပ်အချက်အလက်များသည် စမ်းသပ်အသုံးပြုသည့် ဆော့ဝဲလ်ဗားရှင်း၊ စမ်းသပ်သည့် ပါတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေနှင့် သတ်မှတ်ထားသော ဗားရှင်းများကိုအခြေခံကာ အနည်းငယ် ကွဲလွဲမှုရှိန်ိုင်ပါသည်။